Global Voices teny Malagasy » “Manana ny fahalalana ifotony nampianarin’ny ray aman-drenibe anay izahay.” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jona 2018 5:03 GMT 1	 · Mpanoratra Gildardo Juaréz Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Ny Tetikasa Reframed Stories  dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonina misy azy. Ireny tantara ireny dia eritreritry ny olona izay matetika isoloan'ny hafa tena ao amin'ny media. Noforonina ny zavon-teny amin'ny fampiasana ny sehatra Media Cloud , fitaovana fanadihadiana tahiry izay manadihady ny angona media amin'ny fotoana iray manokana, ahafahan'ny mpandray anjara mandinika sy mifanakalo hevitra ny santatry ny fijery amin'izay anehoana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao. Mitandrina tsara ny tetikasa mba tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ny lahatahiry, fa io no fiaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolana ny fampitam-baovaon-dry zareo manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Gildardo Juarez Vega dia mpikambana ao amin'ny SURCO AC , fikambanana mpikatroka ifotony izay miompana manokana amin'ny fampahalalam-baovaon'ny vondrom-piarahamonina. Avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Ayuuk ao Coatlán ao amin'ny fanjakana Oaxaca, Meksika izy, ary koa avy amin'ny kolontsaina Ayuuk Jaay (fantatra koa hoe Mixes ). Ity manaraka ity dia dika tamin'ny fandraketam-peo fanadihadian'i Gildardo momba ny zavon-teny manondro ny voambolana “indígena” (tompotany).
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 26189 nivoaka tanelanelan'ny Mey 2017 ka hatramin'ny Mey 2018 hita nanonona “indígena” (tompotany) tao anatin'ny angona Media Cloud roa amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny Espaniola ao Meksika. (Mijery sary lehibe kokoa )
Lazaina fa Marichuy  (María de Jesús Patricio Martínez) izahay, izahay no mpitondra tenin'ny CNI (Kongresim-pirenen'ny Tompotany ), izahay no kandidà (ho filoham-pirenena).
Ity dia ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetina tao anatin'ny hetsika nokarakarain'ny SURCO A.C.  ao Oaxaca, Meksika. Nanampy tamin'ny fikarakarana atrikasa natao ny 29-30 May 2018 tao Oaxava, Meksika izy ireo izay nitondra miaraka ny solontenan'ny fikambanana sy vondrom-piarahamonina isan-karazany, indrindra avy amin'ny onjam-peon'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hanadihady ny lohahevitra lehibe amin'izy ireo sy ny fomba hisehoan'izy ireo amin'ny angona media Meksikana sy hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/05/120520/
 sehatra Media Cloud: https://mediacloud.org/
 Mijery sary lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/05/Screen-Shot-2018-05-28-at-12.14.56.png
 Kongresim-pirenen'ny Tompotany: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Indigenous_Congress